Inkinga yegesi eyingozi iyenezela kosizi bendawo ezingxenyeni ezithile zezwe
Inkinga yegesi eqhubeka njalo ngoLwesibili iqhubeke ukudala izinkinga kubantu bendawo ezingxenyeni zezwe.
Ngokwemininingwane, isimo eLahore, Faisalabad, Rawalpindi, i-Islamabad nakwamanye amadolobha asePakistan selande kakhulu ngemuva kokushoda kwegesi sekufinyelele ezingeni elingalawuleki.
Ngenkathi beqopha izikhalazo zabo, abantu bendawo bathi babhekene nobunzima obukhulu ekuphekeni ukudla nokwenza eminye imisebenzi yasendlini ehlobene. Babuye bafuna ohulumeni bezifundazwe ukuthi bathathe lesiya simo baxazulule lolu daba ngokushesha.
Phambilini abakwaSui Northern gesi Amapayipu (SNGPL) babethathe isinqumo sokuqalisa ukuqhekeka kwabathengi besebenzisa ama-compressor kagesi.
Umphathi wesifunda uSNGPL uJaved Khan uthe asikho ukushoda kwegesi, kodwa kunesidingo esikhulu sokuthatha izinyathelo zokumisa imikhuba engekho emthethweni.
Uthe abahlali basebenzisa i-compressor efrijini ukuncela igesi eyengeziwe ukuze kukhuphuke ukuhamba kwayo okuyingozi kakhulu.
NgoDisemba 22, uMsizi oKhethekile kuNdunankulu Wezolwazi uDkt Firdous Ashiq Awan, ngenkathi ekhuluma esithangamini nabezindaba eSialkot, wathi uhulumeni wayeyalele abaphathi abafanele ukuthi baqinisekise ukuthi ukuthunyelwa kwegesi kumakhaya kuncike ekuthini kunciphise ukuhanjiswa kwe-CNG iziteshi.
Ubuye waveza ukuthi kunezimangalo ezingamanga ezifakiwe mayelana nokunyuka kwamanani kaphethiloli.
"Abakwa-Oyili neRhasi Regulatory Authority (Ogra) bamane nje bengabalawuli abathi uma bebheka izinto ezingokoqobo, bedlulisela lokho kuhulumeni. Ubuye waveza ukuthi igagasi eliqhubekayo ebusika lifikile ezweni yingakho sekwande ukwanda isidingo segesi.
"Ukugcina lokhu, kube nokukhuphuka kwengcindezi kagesi ngamaphesenti ayi-12 ngenkathi ukusetshenziswa kwayo kunyuke cishe ngo-2,5% uma kuqhathaniswa nokwangonyaka odlule."